AJA CION 4K / UltraHD / 2K / HD ထုတ်လုပ်သည့်ကင်မရာယခုပို့ဆောင်ခြင်း NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Aja CION 4K / UltraHD / 2K / HD ကိုထုတ်လုပ်မှုကင်မရာအခုတော့သင်္ဘော
Aja CION 4K / UltraHD / 2K / HD ကိုထုတ်လုပ်မှုကင်မရာအခုတော့သင်္ဘော
ထုတ်လုပ်မှုအမြင့်ဆုံးနှင့်အသေးအလွယ်ကူဆုံး 4K လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အတူ post ကို minimize
Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ'' CION 4K /UltraHD/ 2K /HD ထုတ်လုပ်မှုကင်မရာယခုတကမ္ဘာလုံးတင်ပို့နေသည်။ Ergonomics နှင့်မတူနိုင်တဲ့ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူဒီဇိုင်းအတွက်ပေါ့ပါး, CION ™ 4K မှာရိုက်ကူးနိုင်စွမ်း /UltraHD နှင့် 2K /HD ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ။ in-ကင်မရာ 12-bit မှာ ProRes 444 အပါအဝင်ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ၏ Apple က ProRes မိသားစု, ကိုတိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်ကုန်ကျ-ထိရောက်သောမှ Aja Pak, SSD ကိုမီဒီယာမှာ 4K / 60p အထိမယုံနိုင်စရာပုံရိပ်ကိုအရည်အသွေးမြင့်ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်, နဲ့ post ထုတ်လုပ်မှု၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးနှင့်အတူ Compatibility ကိုကမ်းလှမ်း လျှောက်လွှာများ။ CION လည်း 4K / 120p အထိမှာ Aja ကုန်ကြမ်း HFR Output ဖြစ်ပါတယ်။ CION တစ်ခုတည်းသော 4K ဖြစ်ပါသည် /UltraHD 12-bit မှာ ProRes 444 မှပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းဖမ်းယူကြောင့်ရရှိနိုင်ကင်မရာ။
built-in အတူယုံကြည်မှုမော်နီတာနှင့် LAN browser ကိုဗွီဒီယိုကိုထိပုတ်ပါက၎င်း၏အတန်းထဲတွင်အခြားမည်သည့်ကင်မရာကိုထက်အပေါ်-set စောင့်ကြည့်ရေးရလဒျကိုပိုမိုတစ်ပြိုင်နက် featuring, CION ညျဘဏ်ဍာကျယ်ပြန့်များအတွက်အဆင့်မြင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။ အသုံးပြုသူများ 2K x4ပေါင်းစပ်ရှေးခယျြနိုငျ /UltraHD နှင့်32K x /HD သို့မဟုတ် 8 2K x /HDတစ်ဦးပေါင်းစည်း LAN connection ကိုမှတဆင့် Multi-cam Setup အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကကင်မရာအစာကျွေးခြင်းစစျဆေးအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, တွဲဖက်အတွင်းကျန်ရှိနေသေးသောမှတ်တမ်းတင်အချိန်ကိုစောင့်ကြည့်။ အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးစံ web browser ကိုမှတဆင့်မျိုးစုံ CION ကင်မရာများနှင့် set up ကိုထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်ဂိုဏ်းထိန်းချုပ်မှုနိုင်အောင်အဆိုပါထူးခြားသော LAN port နှင့် embedded webserver ကို, အပြည့်အဝဝေးလံခေါင်သီ Configuration နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ပေါ့ပါးသေးခိုင်မာတဲ့မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းကနေဖန်ဆင်းတော်နှင့်တစ်ဦးပုံတရားစွဲပခုံး pad ပါ featuring, CION setup ကိုရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အဆင်ပြေသည်နှင့်လည်ပတ်။ သတ်မှတ်ချက်အပေါ် Aja ရဲ့ Pak အထိုင်အသုံးပြုခြင်း, CION အော်ပရေတာကိုလည်းတည်းဖြတ်များအတွက်ဖိုင်များကိုချက်ချင်းလက်လှမ်းများအတွက် Thunderbolt ™သို့မဟုတ် USB3 မှတဆင့်လျှပ်စစ်အစာရှောင်ခြင်းလွှဲပြောင်းအမြန်နှုန်းအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ third party lens ကိုတောင်ပေါ် / အခြားမည်သည့် 4K ထက် CION သာ. ကြီးမြတ် Compatibility ကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်UltraHD ကင်မရာစနစ်။
"CION R & D, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိမ္မာပါးနပ်ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု၏အနှစ်ခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဖြန့်ချိဖို့ prouder မရနိုငျဘဲ, ဒါကြောင့်တစ်ဦးထူးကဲရုပ်ရှင်ကဲ့သို့ပုံရိပ်အရည်အသွေးနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုကယ်တင်တတ်၏, ဒါပေမယ့်မသက်ဆိုင် resolution ဖြင့်မတိုင်မီအရာအားလုံးထက်မတူပဲထုတ်လုပ်မှု enviroments မှာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုအဆင့်ကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ feature ကို set ကိုကမ်းလှမ်းမသာ - နေတုန်းပဲ Aja သောတူညီသောအကြီးအယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်ထောက်ခံမှုပေးစဉ် လူသိများဖြစ်ပါတယ် "ဟု Nick Rashby, သမ္မတကလည်း, Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ.
sensor: 4K APS-C တခုအီလက်ထရောနစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှပ်နှင့်အတူ CMOS sensor ကိုသုံးနိုင်။ dynamic range ကို၏ 12-မှတ်တိုင်များ။
ထိတွေ့မှုအညွှန်းကိန်း: 250, 320, 500 နှင့် 800
Gamma: မသန်စွမ်း, Normal, ပုံမှန် Expanded, ဗီဒီယိုနှင့် Expanded 1
မှတ်တမ်းတင်ခြင်း Formats နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကို: Apple က ProRes 4444 က Apple ProRes 422 (HQ), Apple က ProRes 422, ProRes 422 (LT) နှင့် Apple ProRes (Proxy); 4K (4096 × 2160), UltraHD (3840×2160), 2K (2048×1080), HD (1920 1080 ×) ။ 2K နှင့် HD ဟာ့ဒ်ဝဲအပြည့်အဝ 4K အရည်အသွေးမြင့်ကျော်-နမူနာပုံရိပ်တွေများအတွက် sensor နဲ့လယ်ကွင်း-of view ၏ retention ကိုကနေပြခဲ့သည်ဆို၏နေကြသည်။
မီဒီယာ: 256GB နှင့် 512GB စွမ်းရည်အတွက်ရရှိနိုင် Aja Pak, SSD ကိုမီဒီယာမှမှတ်တမ်း။ optional ကို Aja ပါကစ္စတန်ဆိပ်ကမ်းနှင့်အတူ Thunderbolt ™သို့မဟုတ် USB3 မှတဆင့်လွှဲပြောင်း; ကနေပြီးပြည့်စုံသော 10-bit နဲ့ 12-bit မှာလုပ်ငန်းအသွားအလာ HD 4K ရန်။
ကုန်ကြမ်းထောက်ပံ့: 3K4fps အထိမှာ 120K4fps အထိသို့မဟုတ် Thunderbolt ™မှတဆင့်မှာ 30G-SDI မှတဆင့် output Aja ရော။
မှန်ဘီလူးတောင်မှာ:3နှင့်အတူဖြုတ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များစံ PL တောင်ပေါ်မှာ,rd CanonEF / FD, Nikon ကင်မရာက F / G-တောင်ပေါ်မှာ, Leica M က, ARRI လှံစွပ်, Panavision နှင့် B4 ENG မှန်ဘီလူးအမျိုးအစားများများအတွက်ရရှိနိုင်ပါတီတောင်ပေါ်။
4 3G-SDI x /HD-SDI ရလဒ် (4K /UltraHD/ 2K /HD)
2 3G x /HDoverlay ကိုထောက်ခံမှုနှင့်အတူ -SDI မော်နီတာရလဒ်
1 က x HDMI 4K များအတွက် output ကိုပူဇော်သက္ကာကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ UltraHD သို့မဟုတ် 2K ခဲ့သည်ဆို၏ /HD
1 က x HDMI 2K များအတွက် output ကို /HD
2 x ကိုမိုက်ကရိုဖုန်း / လိုင်း / 48v XLR Analog စအသံသွင်းအားစု
2 x ကိုလှံထိန်းချုပ်မှု port များ
1 LTC input ကို connector ကို x
1 x ကိုကိုးကားစရာ connector ကို
1 x ကိုကို USB connector ကို
1 10 / 100 / 1000 Ethernet LAN connection ကို x
1 Mini ကို TRS headphone jack x
1 4-pin ကို XLR ပါဝါ connector ကို x
Third-party ဘက်ထရီပြားပူးတွဲများအတွက် 1 x ကို input ကိုပါဝါ connector ကို
1 က x, P-TAP output power ကို connector ကို
1x Thunderbolt ™ connector ကို
optical အနိမျ့ Pass ကိုစစ်မှာ IR ဖြတ် filter ကို: နေဆဲအရေးပါသောအ image ကိုအသေးစိတ်ဆက်ပြီးနေစဉ်ဘက်ပေါင်းစုံ OLPF (Optical အနိမျ့ Pass ကို Filter ကို) မလိုချင်တဲ့moiréဆိုးကျိုးများလျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါအနီအောက်ရောင်ခြည် (IR) ဖြတ် filter ကိုမလိုချင်တဲ့အလင်းလှိုင်းအလျားအားပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် image ကိုအတွင်းအရည်အသွေးမြင့်အရောင်များကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။
နောက်ကျောအာရုံစိုက်ညှိယူ: မှန်ဘီလူးနဲ့အာရုံခံကိရိယာများအကြားအကွာအဝေး၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစံကိုက်ညှိဖြစ်နိုင်တဲ့ sharpest image quality ကိုသေချာစေရန်ထုညှိချိန်ညှိခွင့်ပြုပါတယ်။
စက်မှုဒီဇိုင်း: built-in ယုံကြည်မှုမော်နီတာ Lightweight မဂ္ဂနီဆီယမ်ကိုယ်ထည်, လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပိုကောင်းအောင်ထားရှိစံပြန်ဖွင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် connectors ။ ဘက်ပေါင်းစုံ "ဒိန်ခဲပြား" တပ်ဆင်ဖို့ထိပ်နှင့်ကိုယ်ထည်၏အောက်ဆုံးနှစ်ဦးစလုံး accessories များလွယ်ကူသောအထိုင်ပေး။ အားလုံး CION ဆက်စပ်ပစ္စည်းကွန်နက်ရှင်အချက်များ 15mm ချောင်းတွေအပါအဝင်ပွင့်လင်းစံချိန်စံညွှန်းများ, သုံးစွဲ, 1 / 4-20 နှင့်3/ 8-16 တွင်းပေါင်းလိုက်သောနှင့် M6 hirth-သွား rosettes ။
user interface: အော်ပရေတာဘက် panel က display ကိုထိန်းချုပ်ဖုများနှင့်ခလုတ်မှတဆင့်သို့မဟုတ်တစ် Web-browser ကိုသုံးပြီး LAN connection ကိုမှတဆင့်; အဘယ်သူမျှမ software ကိုတပ်ဆင်ခြင်းလိုအပ်သည်။
CION နည်းပညာဆိုင်ရာဗီဒီယို #1; ထိတွေ့မှုအညွှန်းကိန်း, Gamma နဲ့ In-ကင်မရာအရောင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှိုင်းယှဉ် မှ Aja စျေးကွက် on Vimeo.
CION အဘို့အရောင်းစျေးသတ်မှတ်အမေရိကန် MSRP $ 8,995 ဖြစ်ပါတယ်။ Aja Pak, SSD ကိုမီဒီယာ $ 695 (256GB) နှင့် $ 1295 (512GB) ၏အမေရိကန် MSRP မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။ Aja Pak Dock သည်အခြား Aja ကင်မရာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏အိမ်ရှင်နှင့်အတူ $ 395 တစ်ဦးအမေရိကန် MSRP မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။ အမိန့်နေရာ, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.aja.com/en/where-to-buy#wtb-cion Aja CION ပြန်လည်ရောင်းချသူများစာရင်းတစ်ခုပါ။ အပိုဆောင်း CION သတင်းအချက်အလက်နှင့်အင်္ဂါရပ်များအပြည့်အဝစာရင်းအဘို့, ခရီးစဉ်ကို www.aja.com
Alphatron, MTF, Portabrace, သစ်သားကင်မရာအပါအဝင် third-party ကင်မရာဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ, Vocas, Zacuto, Arri နှင့်အခြားသောပြီးသား CION များအတွက် Viewfinder ကနေမှန်ဘီလူးတောင်ပေါ်နှင့်အကာအကွယ်ဖြစ်ပွားမှုမှအများအပြားဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်နှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာလက်လီလိုင်းများမှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါပြီ။ Aja ကုန်ကြမ်းများအတွက်ပံ့ပိုးမှုပြီးသားကို Adobe နှင့် Colorfront အပါအဝင်စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်လုပ်ငန်းအသွားအလာကုမ္ပဏီများ, နေဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
1993 ကတည်းက Aja ဗီဒီယိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုစျေးကွက်မှအရည်အသွေးမြင့်, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောထုတ်ကုန်ဆောင်ခဲ့, ဗီဒီယို interface ကိုနည်းပညာများ, converters အဖြစ်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာများတစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ Aja ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မြက်ချိုင့်, ကယ်လီဖိုးနီးယား၌အကြှနျုပျတို့၏အဆောက်အဦမှာအများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့်စနစ်များပေါင်းစည်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်ရောင်းအားရုပ်သံလိုင်းမှတစ်ဆင့်ရောင်းချကြသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်အဘို့, ငါတို့၏ website မှာကြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး www.aja.com.
2K 4K Aja audio အသံလွှင်း ကင်မရာများ CION HD post ကိုထုတ်လုပ်မှု ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကြမ်း HFR SSD UHD လုပ်ငန်းအသွားအလာ 2014-12-22
ယခင်: Yu + ပူးတွဲရန်း Park ရဲ့ NYELA များအတွက် 22-ပုံပြင် Projection မြေပုံအံ့မခန်းဖန်တီးလိုက်တဲ့
နောက်တစ်ခု: သေတ္တာ & Barrel နှင့်အတူအားလပ်ရက်များတွင်အတ္ထုပ္ပတ္တိရဲ့လော်ရီ Rubin ကလက်စွပ်